Hilibka leh majones in foornada
Hilibka leh majones waa delicious deliciously, saxan raaxo leh oo madax banaan. Diyaarintiisa uma baahna dadaal iyo waqti badan. Waxaadna u adeegi kartaa saxan leh saladh ah khudradda cusub iyo geedo yaryar.
Hilibka leh majones iyo jiis
khamriga khudradda - 3 tbsp. qaadooyin;
biyo karkariyey - 3 tbsp. qaadooyin;
jiis adag - 400 g;
cagaarka dill, dhir - at doonaa;
Hilibka la dhaqay, la qalajiyey iyo jarjar yar yar. Si tartiib ah u garaaci hal walbo leh jajab kijada ah, milix iyo hilib basbaas oo labada dhinacba dhadhamiya. Kadibna ka tag hilibka doofaarka dhawr saacadood si aad u marineyso, ku rid qaboojiyaha, si ay u noqoto mid jilicsan oo udgoon.
Oo wakhtigan waxaannu u diyaarinaa qaanso, waxaannu ka nadiifin doonnaa alwaaxyada, oo waxay ku dhex xidhmooyinka qurxoon oo waxay ku daadi biyo kele. Ka dibna si tartiib ah u daadi biyaha oo ku qoyso 30 daqiiqadood xal xal laga sameeyey khal iyo biyo. Marka xigta, qaado saxan ciriiri leh oo dufan leh subagga sabdo fiican leh. Hadda hilibka ku shub hoosta si aad u googooyo midba midka kale ha dhigin, laakiin lakab isku mid ah. On top saaray gelin siddooyinka basasha la googo, saliid all oo leh majones iyo gelin hilibka foornada.
Nadiifi saxanka saacad heerkul ah 200 darajo. 10 daqiiqo ka hor dhammaadka karinta, waxaannu qaadannaa hilib, waxaan ku rusheynaa qadar badan oo jiiska jiiska ku daadi on sare, dufanka cagaarka ah iyo dib ugu soo dir foornada. Waxaan u fiirsanaa diyaargarowga saxda ah sida caadiga ah, oo lagu riixo gabal doofaar oo leh foosto. Hilibka ka yar majones waxaa loo adeegaa miiska loogu talagalay suxuunta kasta, laakiin si gaar ah ayaa si fiican loogu daraa baradho la shiilay . Waxaad isticmaali kartaa quraarad khudaar cusub ama la dubay sida ikhtiyaar fudud. By habka, hilibku wuxuu noqon karaa pre-marinated in majones.
Salad ee beetroot iyo bocorka
Boorashka Alaska leh dabacasaha iyo basasha marinade - cuntooyinka macquulka ah iyo kuwa asalka ah ee suxuunta fudud
Yaanyada qorraxda-qallalan ee foornada jiilaalka
Salad ka soo mackerel qasacadaysan
Hilib digaag ah, oo lagu dubay khudaarta
Ku dabool dheryaha - cuntooyinka macaan ee macaan ee macaan
Trepangi - Cuntada
Recipe ee qajaar la leh qoryaha casaan iyo qajaar
Caviar ka soo caviar - cuntada ugu fiican ee cunto fudud oo caan ah
Cutlets leh jiis
Baastada leh faleebo shamiito ah
Patties leh bariis
Qulqulka qorraxda-qallalan ee guriga
Shahaadada dhalashada ee ilmaha
Cristiano Ronaldo ayaa saxiixay qandaraas aan rasmi aheyn Nike
Maqnaanshaha Plum for jiilaalka
Tartamada carruurta ee wadada xagaaga
Qurxinta qolka guriga
Faahfaahinta loogu talagalay anteroom
Isbeddel strawberry - sii kordhaya abuurka
Abuurka Pumpkin ee miisaan lumis
Ubax ka mid ah farxada dumarka - daryeel guriga, talooyin si guul leh u koraya
Anna Kournikova iyo Enrique Iglesias waxay noqdeen waalidiin mataano ah
Kubbadaha suugada macaan iyo macaan
Sidee loo magacaabaa cunnuga wiilka - ururinta naanaysta ee dhammaan marxaladaha
Ninkani wuxuu isu keenaa dareenka dareenka leh xayawaanka!
Ozzy Osbourne ayaa faallo ka bixiyay furitaankiisa Sharon
Waa sidee khafiifinta Renee Zellweger?
Kizilovoe macaanka leh cayayaanka - faa'iido
The Great Blue Dole
Waa maxay sababta riyo ah maraq?
Salma Hayek ayaa qeyb ka qaadatay sawir muuqaal ah oo lagu magacaabo Rhapsody Magazine